Indabuko Yakho » Archives » 2014 » February
In Umlando ngezibongo / by Bongani Kholo Khumalo / on February 24, 2014 / 2 Comments
AbakwaNgidi :::: Abantu bakwaNgidi bangaManguni angamaLala ngokwezigaba zobunguni. Phela abantu bakwaNgidi baphuma ozalweni lukaVumizitha wazala abakwaNgcobo. Abantwana bakaVumizitha abaziwayo uNgcobo, uMkheshane kanye noNgidi. Akucaci ukuthi balamana kanjani kodwa siyazi ukuthi kungenzeka ukuthi bazalwa omama abahlukene. Umlando uyakuveza ukuthi uVumizitha wayeliqhamukisa kwelakwaMthethwa kodwa wazinza kwelaseNkandla. UNgidi njengezinye zezingane zikaVumizitha wakhulela khona ezintabeni zaseNkandla.Kunemibono eyahlukahlukene ngempilo kaNgidi; abanye bathi kwathilapho sekufanele kubekwe umuntu... qhubeka ufunde »
In Umlando ngezibongo / by Bongani Kholo Khumalo / on February 23, 2014 / No Comments
Abantu bakwaKhwela bangabanye bendlu kaQwabe. Noma nengabalulekile emlandweni kangangokuthi abanye baze bathi akusiwona amaZulu kahle ngoba bengazelwa lutho. Kodwa kuthiwa uTotose indodana kaLufutha waxabana nabo wase ebashiya wakhwela izintaba wayokwakha komakhelwane bakhe ezintabeni baseMangangeni... qhubeka ufunde »
In Umlando ngezibongo / by Bongani Kholo Khumalo / on February 21, 2014 / No Comments
AbakwaSibiya.. Badabuka eMhlathuze. BangamaNtungwa Nguni ngokwezigaba zobuNguni Bazalwa uMalandela obeyinkosi yaMaNguni endlini encane, phela endlini enkulu uMalandela wazala uQwabe owazala abakwaQwabe, kanye nomnawakhe uZulu owazala abakwaZulu. UKUDABUKA KWABANTU BAKWASIBIYA KUSUKELA EZINSIZW... qhubeka ufunde »